Nanompo ny Olona i Jesosy
Nanompo ny Olona Ilay Mpampianatra Lehibe
TIANAO ve rehefa misy olona manao zavatra tsara ho anao?... Tian’ny olona koa rehefa manao zavatra tsara ho azy ny hafa. Tia an’izany isika rehetra. Fantatr’ilay Mpampianatra Lehibe izany, ka nanao zavatra ho an’ny olona foana izy. ‘Tonga aho, tsy mba hotompoina, fa mba hanompo’, hoy izy.—Matio 20:28.
Inona no nampiady hevitra ny mpianatr’i Jesosy?
Inona àry no tsy maintsy ataontsika raha tiantsika ny hanahaka an’ilay Mpampianatra Lehibe?... Tsy maintsy manampy ny olon-kafa isika. Tsy maintsy manao zavatra tsara ho azy ireo isika. Marina fa maro ny olona tsy manao an’izany. Ny hafa foana no tiany hanao zavatra ho azy. Nanao toy izany na dia ny mpianatr’i Jesosy aza. Samy te ho ambony noho ny namany izy rehetra.
Nandeha niaraka tamin’ny mpianany i Jesosy indray andro. Niditra tao amin’ny trano iray izy rehetra, rehefa tonga tao Kapernaomy, tany akaikin’ny Ranomasin’i Galilia. ‘Inona no niadianareo hevitra teny an-dalana?’, hoy i Jesosy nanontany azy ireo. Nangina izy ireo satria niady hevitra momba ny hoe iza no ambony tamin’izy rehetra.—Marka 9:33, 34.
Fantatr’i Jesosy fa tsy nety raha nisy tamin’ny mpianany nihevitra ho ambony noho ny namany. Araka ny nianarantsika tao amin’ny toko voalohany tamin’ity boky ity àry, dia nisy ankizikely iray nasain’i Jesosy nitsangana teo afovoan’ny mpianany. Nolazainy avy eo fa tokony hanetry tena tahaka an’ilay ankizikely izy ireo. Mbola tsy nanaiky ihany anefa ireo mpianatra ireo. Nampianatra azy ireo zavatra tsy nohadinoiny mihitsy àry i Jesosy, taloha kelin’ny hahafatesany. Inona no nataon’i Jesosy tamin’izany?...
Rehefa niara-nisakafo izy rehetra, dia nitsangana i Jesosy ary nanala ny akanjony ivelany. Nandray servieta izy ary nisikinany. Naka koveta indray izy dia nasiany rano. Tsy maintsy samy nieritreritra ny mpianatra hoe inona no hataon’i Jesosy. Notetezin’i Jesosy tsirairay àry izy ireo, ka niondrika izy nanasa ny tongotr’izy ireo. Nofafany tamin’ny servieta ny tongotr’izy ireo avy eo. Eritrereto ange e! Ahoana raha teo ianao tamin’izay? Ahoana no nety ho fihetsikao?...
Inona no zava-dehibe nampianarin’i Jesosy ny mpianany?
Noheverin’ireo mpianany fa tsy nety raha ilay Mpampianatra Lehibe no nanao zavatra toy izany. Menatra izy ireo. Saika tsy navelan’i Petera hanasa ny tongony aza i Jesosy satria asa ambany izany. Nolazain’i Jesosy anefa fa nilaina iny zavatra nataony iny.
Tsy zatra mifanasa tongotra isika. Zavatra fanao anefa izany tamin’ny andron’i Jesosy. Inona ny antony, raha fantatrao?... Tany amin’ny toerana nisy azy sy ny mpianany, dia nanao kapa ny olona ka feno vovoka ny tongotra rehefa nandeha teny an-dalana. Nanasa ny tongotry ny vahininy ny tompon-trano, raha tsara fanahy.
Tsy nisy nanolo-tena hanasa ny tongotry ny namany anefa ny mpianatr’i Jesosy, tamin’io fotoana io. I Jesosy mihitsy àry no nanao izany. Fianarana lehibe no nomeny ny mpianany tamin’io. Nila izany fianarana izany izy ireo. Mila izany koa isika.
Inona ilay fianarana, raha fantatrao?... Rehefa avy nanao ny akanjony ivelany indray i Jesosy ary naka ny toerany teo amin’ny latabatra, dia nanazava hoe: ‘Fantatrareo ve izay nataoko taminareo? Ianareo manao Ahy hoe: Mpampianatra sy Tompo; ary marina ny filazanareo, fa izany tokoa Aho. Koa raha Izaho, Tompo sy Mpampianatra aza, no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony hifanasa tongotra.’—Jaona 13:2-14.
Inona no azonao atao hanampiana olon-kafa?
Nasehon’ilay Mpampianatra Lehibe teo fa tiany hifanampy ny mpianany. Tsy tiany ho tia tena izy ireo. Tsy tiany hihevitra ny tenany ho ambony izy ireo ka hoe ny hafa foana no tokony hanao zavatra ho azy. Tiany hanampy an-tsitrapo ny olon-kafa izy ireo.
Fianarana tena tsara izany, sa ahoana?... Hanahaka an’ilay Mpampianatra Lehibe ve ianao ka hanampy ny olon-kafa?... Afaka manao zavatra ho an’ny olon-kafa isika rehetra. Hahafaly azy ireo izany. Fa ny tsara indrindra, dia hahafaly an’i Jesosy sy ny Rainy koa izany.
Tsy sarotra ny manampy olon-kafa. Raha mijery tsara ianao, dia hahita fa misy zavatra maro azonao atao. Mieritrereta kely ange e! Misy zavatra azonao anampiana an’i Neny ve? Fantatrao fa maro ny zavatra ataony ho anareo rehetra ao an-trano. Inona no azonao anampiana azy?... Nahoana raha anontaniana izy?
Azonao atao, ohatra, ny manomana ny vilia sy sotro alohan’ny sakafo, na manala ny vilia maloto sy manadio, rehefa avy misakafo. Misy ankizy manary fako isan’andro. Na inona na inona azonao atao, dia hanampy ny olon-kafa tahaka ny nataon’i Jesosy ianao.
Manana zandry azonao ampiana ve ianao? Tadidio fa nanampy ny mpianany koa i Jesosy, ilay Mpampianatra Lehibe. Hanahaka an’i Jesosy ianao raha manampy ny zandrinao. Inona no zavatra azonao atao?... Azonao atao, ohatra, ny mampianatra azy hampirina ny kilalaony, na manampy azy hiakanjo, na manampy azy hanamboatra ny fandrianany. Mbola misy zavatra hafa azonao atao koa ve?... Ho faly be aminao ny zandrinao raha manao izany aminy ianao. Faly be tamin’i Jesosy koa ny mpianany satria nanampy azy ireo izy.
Afaka manampy koa ianao any am-pianarana. Mety ho ny mpiara-mianatra na ny mpampianatra no ampianao. Raha latsaka ny bokiny, dia tsara raha ampianao izy ka raisinao ilay boky. Tsara koa raha manolo-tena hamafa solaitrabe ianao, na hanao zavatra hafa ho an’ny mpampianatra. Tsara koa ny fihetsikao raha manokatra ny varavarana hidiran’ny olona iray ianao.
Tsy hisaotra antsika ny olona sasany indraindray rehefa manampy azy isika. Tsy tokony hanampy olona intsony ve izany isika, araka ny hevitrao?... Tsia. Betsaka ny olona nampian’i Jesosy nefa tsy nisaotra azy. Mbola nanampy olon-kafa ihany anefa izy.
Aoka àry isika tsy hisalasala hanampy olon-kafa mihitsy. Tadidio i Jesosy, ilay Mpampianatra lehibe, ary miezaha hanahaka azy foana.
Ireto misy andininy miresaka fanampiana olon-kafa azontsika vakina: Ohabolana 3:27, 28; Romanina 15:1, 2; Galatianina 6:2.
Hizara Hizara Nanompo ny Olona Ilay Mpampianatra Lehibe